Wararka Maanta: Axad, Apr 14, 2019-Somaliland oo maanta loo dareeray salaad Roob doon ah
Axad, April, 14, 2019 (HOL) - Gobolada iyo degmooyinka Somaliland ayaa maanta looga dareeray salaada Roob doon ah oo ilaahay lagu baryeyo inuu abaaraha ka jabiyo, isla markaana roob khayr qaba u keenno.
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta shacabka ku dhaqan magaaladaHargeysa kala qayb-galay salaadaasi Roob-doonta ah.
Madaxweyne Biixi waxa uu guud ahaanba shacabka Somaliland ugu baaqay inay gacmaha isu wada-qabsadaan sidii uga qayb-qaadan lahaayeen qorshayaasha waqtiyada abaaraha dadka iyo duunyaduba ku badbaadi karaan, qalbigooda iyo niyaddoodana saafi ka dhigaan.
“Abaaraha waxa aynnu kaga bixi karnaa innaga oo isku kalsoonaanna, xooggeena iyo xoolaheenna isku geynna, sidee ayeynu abaarta uga bixi karnaana ku dhaqaaqna, waxa inoo taalla in Biyaha qofba inta uu qaban karno aynnu qabanno oo dawlad, shacab iyo ganacsatoba intaynnu xoog ku qaban karno isugu geynno,” ayuu yidhi Biixi .
Ugu dambayntii waxa uu bulshada Somaliland Eebbe uga baryey inuu abaaraha kasoo furto, cirkana madar Khayr qayba ka siiyo, isaga oo shacabkana ugu baaqay inay quluubtooda nadiifiyaan